कपिलवस्तुमा एकै दिन २८ संक्रमित थपिए- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
भारतबाट आउँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएका अर्घाखाँचीका एक व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ
जेष्ठ १६, २०७७ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — कपिलवस्तुमा बिहीबार एकै दिन कोरोनाका २८ संक्रमित थपिएका छन् । यीमध्ये एक जनामा मृत्यु भइसकेपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी अर्घाखाँचीका बासिन्दा हुन् ।
विजयनगर गाउँपालिकामा एकै दिन ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले गरेको पीसीआर परीक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो । रामनरेश माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरू वार्ड नं. ३, ५ र ७ का हुन् । यससँगै विजयनगरमा संक्रमितको संख्या १३ पुगेको छ ।
त्यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकामा १७ जना थपिएका छन् । यिनमा वडा नं ७ का एक, ८ का १२, वडा नं. १० का एक र वडा नं. ११ का तीन जना छन् । महाराजगन्ज नगरपालिका–७ का एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान गाउँपालिका–९ का ३५ वर्षीय व्यक्तिको भारतबाट आउने क्रममा कपिलवस्तुमा मृत्यु भएको थियो । जेठ ११ मा कृष्णनगरमा उनको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यससँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ सय ३६ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना नियन्त्रण फोकल पर्सन कुमार थापाले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:०७